I-1756-IF16 Allen Bradley, Abahlinzeki - China - HuiTong Industry Company Limited google-site-verification=TXg1_WchYlMLB36tKPCkhY02HfKkkQfiMDCP-ksCfHM
Ikhaya > Imikhiqizo > I-Rockwell automation > Allen Bradley PLC > 1756-IF16
Incazelo:Isilawuli se-ControlLogix 16 Pt A / I
I-Allen-Bradley 1756-IF16 is a module ye-analog engafani neyedwa / ye-voltage I / O. Ukuze uxhume ku-ControlLogix chassis, i-1756-IF16 idinga i-RTB noma isisongeli sebhokisi elihlanganisiwe le-1756-TBS6H noma 1756-TBCH. Imodyuli yokufaka inamaphuzu ayi-16 atholakalayo. Ngokungafani namanye amamojula, i-1756-IF16 ivumela abasebenzisi ukuthi baxhume amamojula ngezindlela ezihlukile.
I-1756-IF16 ingafakwa ngocingo ngezindlela ezintathu ezihlukene, kuya ngezidingo zomsebenzisi nezinhlelo zokusebenza: i-wiring ephela, i-wiring ehlukile, ne-high-speed mode umahluko we-wiring. Lapho wonke amadivaysi wokufaka egxilwe, kusetshenziswa ama-wiring a-single. Lokhu ukuqhathanisa umehluko phakathi ohlangothini lokufakwa kwesiginali nomhlaba wesiginali, obese usetshenziswa yi-module ukukhiqiza idatha yedijithali yesilawuli. Ingakwazi ukuqeda izintambo ezi-16 eziphelela ngaphandle. Lapho uhlelo lokusebenza lungenawo umhlaba ovamile noma ungaba namabili wesiginali ahlukene, kunconywa indlela yokwehlukanisa wiring. Le ndlela ye-wiring nayo ilungele izindawo lapho ukungavikeleki komsindo kufanele kuthuthukiswe. Iziteshi ezikumodi yokuhlukanisa azihlukanisiwe ngokuphelele komunye nomunye.
1756-IF16 Inkomba imicimbi:
Uma amasiginali wokufaka ahlukahlukene ahlukahlukene enezethenjwa ezejwayelekile zamandla, isiteshi esisodwa singathinta ukufundwa kwesinye isiteshi. Lapho lokhu kwenzeka, umsebenzisi kufanele axhume okokufaka kwimodyuli ehlukile noma abeke imodyuli engeyona eyedwa ngemodyuli yokufaka eyodwa. I-1756-IF16 ivumela ukuxhumana okuyisishiyagalombili kule modi. Ekugcineni, indlela yejubane elikhulu yokuhlukanisa ama-wiring iyakwazi ukubona ukuvuselelwa kwedatha. Noma kunjalo, umsebenzisi kufanele abe nemibandela ethile yokusebenzisa imodi yejubane eliphezulu. Okokuqala, isebenzisa indlela yokuhlukanisa i-wiring. Okwesibili, kule modi, munye kuzo zonke iziteshi ezine ezisetshenziswayo kule module ongasetshenziswa.
Ukusetshenziswa kwamandla kwe-module ye-1756-IF16 yi-watts eyi-2.3, namandla aphelele wesipanela emuva yi-2.33 watts. Ububanzi bokufaka yi-± 10 volts, kusuka ku-0 kuye ku-10 volts, 0 kuya ku-5 volts, noma u-0 kuye ku-20 mA. Umdwebo wamanje we-module ngu-5 1 V ngu-150 mA, noma i-24 V ingu-65 mA. Amandla kagesi nokulinganisa kwamanje kweplanethi yangemuva yi-DC 5.1 V, i-150 mA ephezulu, i-DC 24 V enkulu, i-65 mA. Ibanga lamanje lokufaka liyi-4 kuye ku-20 mA, ububanzi bokufaka kwamandla buyi -10 kuya ku-10 V, futhi bunqunyelwe ku-100VA. Ukusetshenziswa kwamandla kwamandla kagesi cishe ama-watts ayi-2.3 kanti ukusetshenziswa kwamandla njengamanje yi-3.9 Watts.
Amandla ka-1756-IF16 voltage has a dissertation yokushisa ka-7.84 BTU / ihora kanye nanjini eyi-13.3 BTU / ihora. Iphinde ibe nokuvikelwa okwedlulele kuze kufike ku-30 ​​V DC (i-voltage) ne-8 V DC (yamanje). Ukusetshenziswa kwamandla kwamandla kagesi cishe ama-watts ayi-2.3 kanti ukusetshenziswa kwamandla njengamanje yi-3.9 Watts. Ukushiswa kwamandla kagesi kungu-7.84 BTU / ihora kanti okwamanje kungama-13.3 BTU / ihora. I-1756-IF16 ibuye ibe nokuvikelwa okwedlulele kuze kufike ku-30 ​​V DC (i-voltage) ne-8 V DC (yamanje). Ukusetshenziswa kwamandla kwamandla kagesi cishe ama-watts ayi-2.3 kanti ukusetshenziswa kwamandla njengamanje yi-3.9 Watts. Ukushiswa kwamandla kagesi kungu-7.84 BTU / ihora kanti okwamanje kungama-13.3 BTU / ihora. Iphinde ibe nokuvikelwa okwedlulele kuze kufike ku-30 ​​V DC (i-voltage) ne-8 V DC (yamanje).
Ngaphezu kweminyaka engu-10 yokuthumela okuhlangenwe nakho kwemikhiqizo ezenzakalelayo yezimboni!
AKUFUNI UKUZE KWAMAHHALA KWAMAHHALA okuphukile umsebenzi wethu! Sithatha le mission futhi siyaqhubeka nokusebenzisa njalo!
100% Izingxenye ezikhululekile zangempela zasefekthri.
Izinkulungwane zezingxenye esitokisini!
Izindawo zokugcina ezi-3 kanye nokuphepha kwesitoko esiyizigidi ezimbili zamadola ama-USD Allen Bradley Izingxenye!
Amathegi ashisayo: 1756-IF16 Allen Bradley, Suppliers, Wholesale, Thenga, China, Intengo Ephansi, Uhlu lwamanani, Izilinganiso
Allen Bradley 1756-IF16I-Rockwell automation 1756-IF16